Report: Myanmar’s media freedom at risk — ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသော မြန်မာ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် – Free Expression Myanmar
May 02, 2018 by Coordinator	in Publications ထုတ်ဝေစာများ
This survey, carried out nationwide byacoalition of organisations between December 2017 and April 2018, measures journalists' opinions onarange of issues that are critical to media freedom.
Journalists conclude that media freedom is declining in Myanmar, and that the government, including the military, is the main cause of this.
Worryingly, journalists believe that legal, physical, and psychological violence towards them has increased, and that there is little evidence that the government or courts are trying to address either violence or the decline in media freedom.
Journalists also conclude that their freedom to report in conflict areas has declined, and that media pluralism and diversity are unchanged, partly due to the continued domination of the state media.
အလွန်တရာ အရေးပါအရာရောက်သော သတင်းများကို စုံစမ်းရှာဖွေ၊ ရယူထုတ်ပြန်နိုင်သော မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအဆင့်အတန်းကို တိုင်းတာနိုင်သည့် အကောင်းဆုံး နည်း လမ်းများ အနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။
သတင်းမီဒီယာသမားများသည် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် မည်မျှရရှ်ိသည် ဆိုသည်ကို အကောင်းဆုံးသိရှိကြသလို၊ အတိတ်ကမိမိတို့၏ အတွေ့ အကြုံနှင့် လတ်တလော တွေ့ကြံုရသော အတွေ့အကြံုများကို နှိုင်း ယှဉ်ပြီး မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၏ ဦးတည်ရာကို ခန့်မှန်းသတ်မှတ် နိုင်ကြ သည်။
ယခုစစ်တမ်းသည် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်တွင် သက်ရောက်သော အရေးကြီးသည့် ပြ ဿနာနယ်ပယ်အတိုင်းအတာအပေါ်တွင် သတင်း မီဒီယာသမားများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက် သဘော ထားများကို တနိုင်ငံ လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အဖွဲ့ပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းလျှက် ၂၀၁၇ ဒီ ဇင်ဘာလ မှ ၂၀၁၈ ဧပြီလ အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သောစစ်တမ်းဖြစ်သည်။
သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ ကောက်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်သည် ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလျှက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ အစိုးရနှင့် စစ်တပ်ပင်ဖြစ်သည် ဟုလည်း သုံးသပ်ကြသည်။
စိုးရိမ်ပူပန်စွာဖြင့် သတင်းမီဒီယာသမားများ ယုံကြည်နေကြသည်မှာ သူတို့အပေါ် ဥပဒေရေးရာအရဖြစ်စေ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်စေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်စေ အကြမ်းဖက်မှုများသည် တိုးမြင့်လာနေပြီး၊ အစိုးရနှင့်တရားရုံးများသည် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ဆုတ်ယုတ်လာ ခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို ကြိုးစား ဖြေရှင်းပေးမှု အထောက်အထား အနေဖြင့်လည်း လွန် စွာနည်းပါးလာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
သတင်းသမားများက ကောက်ချက်ထပ်မံချသည့် အချက်မှာ - အထိက ရုဏ်းနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ် ပွားရာဒေသများအတွင်း သတင်းရယူနိုင်ခွင့်သည် လည်း ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်း မီဒီယာ၏ လွှမ်းမိုးမှု ဆက်လက်ရှိနေခြင်းကြောင့် မီဒီယာဗဟုဝါဒ နှင့် မီဒီယာ မတူ ကွဲပြားမှုသည်လည်း ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပေ။
Download the full report Myanmar's media freedom at risk in English and Burmese »
အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နှစ်ဘာသာ ပါဝင်သော ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသော မြန်မာ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရန် »
Tagged with: Broadcasting Law, Community media, Defamation အသရေဖျက်မှု, Electronic Transactions Law, Gender လိင်, Media freedom, Myanmar Press Council, National security အမျိုးသားလုံခြုံရေး, News Media Law, Official Secrets Act, Penal code ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ, Printing and Publishing Law, Protection of journalists and human rights defenders, Supreme Court, Telecommunications Law ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ